Hodges Jikọọ Archives »Mahadum Hodges
Category: Hodges Jikọọ
Akwụkwọ, Hodges Jikọọ
Mahadum Hodges na-enyere aka mejupụta oghere ọrụ na Hodges Jikọọ Mahadum Hodges na-aza oku a na-akpọ maka mmepe nka ndị ọrụ site na iji usoro ọzụzụ ọkachamara anyị, Ọzụzụ Ndị Ọzụzụ na Ọzụzụ (PET), nke a na-akpọ Hodges Connect. Hodges Jikọọ bụ maka inye ndị ọrụ anyị ọrụ asọmpi ma hazie ya iji kwadebe ndị ọrụ na ndị ọrụ chọrọ ọrụ dị mkpa iji [...]	GỤKWUO
Ijuputa oghere ọrụ ndị ọrụ na Initiative Training Initiative: Mahadum Hodges kwuwapụtara Hodges Jikọọ Oghere ndị ọkachamara na-arụ ọrụ bụ ihe ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka azụmaahịa na-atụle kemgbe ọtụtụ afọ. Corlọ ọrụ na-arịọ maka azịza ya. Mahadum Hodges na-aza oku ahụ na mbido ọzụzụ ọkachamara ya, Ọzụzụ Ndị Ọzụzụ na Ọzụzụ (PET), nke a na-akpọ Hodges Connect. "Hodges Jikọọ bụ […]